Dalladda FSAN & Guddiga masjidka QUBA oo iska kaashaday tillaabo Soomaali badan farxad gelisay - Somnieuws.com
1 sanno gudihiis qofkii 2aad ee Soomaali ah ayaa laga badbaadiyay in meydkiisa la gudbo waddanka Nederlands, kaddib markii dedaalo ay sameeyeen Guddoomiyaha dalladda FSAN Dr. Cali Waare & Guddiga masjida QUBA u qaabilsan aaska ay ku guuleysteen in meydka wiil Soomaali ah ay asturaan dad muslimiin ah.
Liibaan, oo ah wiil dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu guuleysteen in laga soo wareejiyo meydkiisa xero lagu xanaaneeyo dadka aan isku filneyn, ee la maamulo, markii dhowr cisho oo uu yiilay meydkiisa isbitaalka, loona diyaarinayay in la gubo, ay ku soo baxeen waxgarad Soomaaliyeed, waxaana maanta lagu wareejiyay meydka wiilkaasi Guddiga Masjid QUBA u qaabilsan aaska.
Max’ed Xirsi Cilmi oo ka mid ah odayaasha Magaalada Leeuwarden ee Gobolka Friesland, oo la soo xiriiray Somali Nederland TV ayaa sheegay in markii ay ka war-heleen qorshaha ku saabsan in la doonayo in wiil Soomaaliyeed oo halkan ku dhintay meydkiisa la gubo, ay xiriir la sameeyay Guddoomiyaha dalladda FSAN Cali Waare.
“Waxaan ka mid aheyn ururadii lagu aasaasay FSAN, habeen hore siddeedii ayaanu la xiriirnay Guddoomiyaha FSAN Cali Waare, durba wuxuu warqad u soo qoray maamulka meeshii wiilku lagu hayay, waxeyna aqbaleen in nalagu soo wareejiyo; Waxaa maanta 11: 30 meydka marxuumka lagu wareejiyay Guddiga aaska u qaabilsan masjid QUBA; tillaabadaasi waxay ku tuseysaa haddii dadku ay isku uur yihiin, qof walibana howsha uu mudan yahay lagu ixtiraamo in towfiiqdu ay halkaasi ku dhantahay” Ayuu yiri Maxamed Xirsi, isaga oo intaasi raaciyay in Masjid QUBA howl muhiim ah u hayo guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan mushtamaca Soomaalida.
Hooyo Caasha Maxamed oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool Gobolka Friesland, waxay dhinaceeda sheegtay in Soomaalidu jecel yihiin in xal loo helo arrinta masaajidka.
“Ciddina ku farxi meyso in masjidka la xiro, waxaan rajeynayaa in arrintaas xal loo helo, laga soo celiyo maxkamadda, guddiga khilaafku u dhexeeyana lagu saaro culeys in xal ay arrintaasi ka gaaraan” Ayeey tiri Caasho.